Squirrel သူလျှိုငှကျအန်တရာယျကွုံတှေ့ရနားလည်ရန် - BGR - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » သိပ္ပံ "Squirrel သူလျှိုငှကျအန်တရာယျကွုံတှေ့ရနားလည်ရန် - BGR
Squirrel သူလျှိုငှကျအန်တရာယျကွုံတှေ့ရနားလည်ရန် - BGR
တိရစ္ဆာန်နိုငျငံတျော၌များစွာသောသတ္တဝါတွေဟာသူတို့ရဲ့မိဘတွေကိုသတင်းအချက်အလက်ထုတ်လွှင့်ဖို့ထူးခြားသောနည်းလမ်းများကိုဖွံ့ဖြိုးပေမယ့်တစ်ဦးလေ့လာမှုအသစ်အချို့တိရိစ္ဆာန်များလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောမျိုးစိတ်များ၏ဆက်သွယ်ရေးကနေသတင်းအချက်အလက်စုဝေးအရေးကြီးနိုင်ပုံကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ ထုတ်ဝေအဆိုပါသုတေသန, PLOS One ကို ရှဥ့်ရုံသတိလစ်အမွေးမှမိတ်ဆွေများကသူလျှိုအားဖြင့်အန္တရာယ်ခံစားနိုင်သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာရှဥ့်ချက်တွေကိုနှင့်ဤ tweets ဘာသာပြန်ဆို (သို့မဟုတ် သိ. ကင်းမဲ့) အနီးအနားမှာသားကောင်တွေကို၏ရှေ့မှောက်တွင် detect လုပ်ဖို့မှငှက်စကားများသောနှင့်အခွက်တဆယ်ကိုနားထောင်မှာအလွန်ကောင်းဖြစ်ကြောင်းထွက်လှည့်။
ဒီလေ့လာမှုအဘို့, သုတေသီများမီးခိုးရောင်ရှဥ့်ခြေရာခံများနှင့်ငှက်အသံ၎င်းတို့၏တုံ့ပြန်မှုစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ အဆိုပါ furry နို့တိုက်သတ္တဝါများအကြားကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်မျိုးစေ့ကြဲဖို့ Hawk ခြိမ်းခြောက်ခေါ်ဆိုမှုအသုံးပြုခြင်း, သိပ္ပံပညာရှင်များ Songbird ၏ရွှင်လန်းအော်ဟစ်ကွဲပြားခြားနားသောကြားကာလမှာကစားခဲ့ကြသည့်အခါလေ့လာတွေ့ရှိအပြုအမူအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသောပါပြီ။
"ကျနော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်နောက်ခံမှဆွေမျိုးငှက်စကားများသောဖတ်၏ကြီးမားသောရှိနေခြင်းမှာရှဥ့်ရဲ့သတိဝီရိယအပြုအမူနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တစ်ဦး Hawk ခေါ်ဆိုခများ၏မှတ်ပုံတင်နှင့်အတူစတင်ပြီးမှစကားများသော၏မရှိခြင်းဖုံးကွယ်ထားကြောင်းပြီးနောက်မဟုတ်အသံ စာဖတ်ခြင်းအတွက်အနီရောင်အမြီး "ဟုအဆိုပါသုတေသီများရေးပါ။ "Squirrel သူတို့အပြုအမူတွေသတိဝီရိယသုံးစွဲခြင်းနှင့်အကြိမ်အရေအတွက်ကသူတို့မဟုတ်ရင်နိုးနိုးကြားကြားမရအပြုအမူတွေအတွက်မျှော်ကြည့်အချိန်အချိုးအစားကိုတိုးမြှင့်သိသိသာသာ Hawk ခေါ်ဆိုခပြန်ဖွင့်ဖို့တုန့်ပြန်ခဲ့ကြ သူတို့တိုးပြီးသို့မဟုတ်ပတ်ဝန်းကျင်ဆူညံသံများစကားများသောရှေ့တော်၌အမြင့်ဆုံး Predator ခြိမ်းခြောက်မှုရိပ်မိကြောင်းညွှန်ပြ။ "
Squirrel, အထက်ကနေချက်ချင်းအန္တရာယ်ခံစားသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှသတိထားရမှာတစ်ခုလွယ်ကူသောမုန့်ညက်ပြင်ဆင်ထားရန်ကိုရှောင်ရှားဖို့သူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်နေခဲ့ကြသည်။ တိတ်ဆိတ်သည့် Hawk ၏မှတျတမျးတငျထားဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနောက်တော်သို့လိုက်တဲ့အခါ, ရှဥ့်ဒီပြည်နယ်ထဲမှာကနျြရပေမယ့်ငှက်စကားများသောပြန်လည်စတင်တဲ့အခါမှာသူတို့ကကောင်းကင်ပြာမဆိုခြိမ်းခြောက်မှုရှင်းလင်းခဲ့ကြောင်းလက္ခဏာသက်သေဘို့ယူလေ၏။
"ကျနော်တို့ကရှဥ့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အတူငှက်အချို့မျိုးစိတ်များ၏နှိုးဆော်သံဖုန်းခေါ်ဆိုမှုစကားကိုနားထောငျသိတယ်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကိုသူတို့မှာလည်းငှက်အတော်လေးခံစားခဲ့ရကြောင်းညွှန်ပြနှိုးဆော်သံ generate မအသံကိုနားထောငျကြောင်းသင်ယူဖို့ဝမ်းသာခဲ့ကြ လုံခြုံရေး "ဟုသိပ္ပံပညာရှင်များပြောသည် ။ "ဒီတစ်ခါလည်းအချို့သောအခြေအနေများတွင်, လုံခြုံရေးညွှန်းကိန်းအန္တရာယ်သတိပေးချက်များကဲ့သို့အရေးကြီးသောဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ "
Image ကိုရင်းမြစ်: ဂျက်ဖရီ Swaine / Shutterstock
အသက်ပိုရှည်လိုပါသလား? ဆိုဒါမသောက်ရပ်တန့် - BGR